ကလေးကို နို့ချိုတိုက်ကျွေးခါစ မေမေတို့ သိမှတ်ဖွယ် | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
2. နို့တိုက်ဖို့အတွက် ကလေးငိုတဲ့အချိန်အထိ မစောင့်ပါနဲ့။ အာဟာရပြည့်ဝစေဖို့ တစ်နေ့ကို ၈ ကြိမ်မှ ၁၂ ကြိမ်ခန့် တစ်နည်းအားဖြင့် ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီကြားတစ်ခါ နို့တိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။
3. နို့ရည်အရည်အသွေးကို ကျစေနိုင်တဲ့ သရေစာတွေ မစားပါနဲ့။ ကလေးကို နို့ကောင်းကောင်းတိုက်နိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးပါ။
4. ကလေးကို မသက်မသာဖြစ်စေနိုင်တဲ့၊ ကလေးအတွက် မကောင်းတဲ့ အစားအစာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ချော့ကလက်နဲ့ အစပ်တွေကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ ကဖိန်းဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ အရက်နဲ့ ဆေးလိပ်တို့ကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
5. နို့သီးခေါင်းကို ကလေးပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကလေးကိုရင်ခွင်ထဲ ပွေ့ဖက်ပြီး ကလေးကို နို့သီးခေါင်းကို သေချာငုံစေပါ။
6. ကလေးကို နို့ဘယ်အချိန်မှာ တိုက်သင့်တယ်ဆိုတာကို အမေးများလေ့ရှိပါတယ်။ ပထမလမှာ ၂ နာရီ - ၃ နာရီခြား တိုက်သင့်ပါတယ်။ ကလေး တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတာနဲ့အမျှ နို့စို့ချိန်ကြာလာပြီး နို့တိုက်ရတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် နည်းလာပါတယ်။
၂၅.၁၂.၂ဝ၂၁ | ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး လုံလောက်မျှတတဲ့ စားသောက်ပုံဟာ မိခင်ရောကလေးပါ ကျန်းမာနေဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်မဆောင်မီကထက် တစ်ရက်ကို ၃၀၀ ကယ်လိုရီလောက် ပိုစားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဘယ်လိုကျန်းမာအောင် စားသောက်ရမယ်ဆိုတာကို ကြည့်ကြရအောင်နော်။...